အလုပ်အရမ်းကြိုးစားနေရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး | The ways to find your edge | Mycanvas
အလုပ်အရမ်းကြိုးစားနေရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး | The ways to find your edge
အချို့သောစီးပွားရေးသမားများကအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်သော်လည်း ကုမ္ပဏီမှသူတို့ထင်ထားသည်ထက် အကဲဖြတ်မှုနည်းတယ်လို့ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ ဟားဗတ်စီးပွားရေးကျောင်းမှ ဆုရပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Laura Huang က “အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းက အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘဝဟာမမျှတပါဘူး။ အထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်ထဲမှာပါ။ သို့သော်သူမဟာ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောတန်ဖိုးကိုအခြားသူများမြင်ရန်နှင့် တန်ဖိုးထားရန် ကူညီပေးသော EDGE Framework ကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ သူမရဲ့စာအုပ်မှာပါရှိတဲ့အတွေးအခေါ်များကို သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုအတွက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုလေ့ လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ References တွေကိုကြည့်ရှုပါ။
[ကြွယ်ဝမှု : အခြားသူများအားသင်ကမ်းလှမ်းသည့်ထူးခြားသောတန်ဖိုးကိုရှာပါ]
1. သင့်အား Pack နှင့်သီးခြားခွဲထားပြီး တန်ဖိုးများပေးတဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ?
2. လူတွေဟာသင်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါ သင်တို့ပေးရမယ့်အခြေခံအကျဆုံးအရာကဘာလဲ?
အခြားသူများမျှော်လင့်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဟာအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော်၎င်းဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
[မွေ့လျော်ခြင်း : Wow Decision Making ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေပါ]
အခြားသူများကိုမွေ့လျော်ရန်သင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သင့်ကိုမကြားနိုင်သဖြင့် သင်ဟာပျင်းစရာကောင်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ထို့နောက် သင့်အကြောင်းသင်ပြောတဲ့အခါ၊ သင်ရောင်းမယ့် Product အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ Business Plan ကို တင်ဆက်ပြတဲ့အခါ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ Expression က စိတ်ဝင်စားမှုရှိသလား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ပျင်းနေပြီလားဆိုတာကို ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ Huang က “ဒီပြောဆိုဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နည်းတွေနဲ့ လူတွေကိုအံ့အားသင့်စေပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
[လမ်းညွှန် : ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ]
လူတိုင်းတွင် တခြားသူများဘက်မှမကောင်းမြင်နိုင်သော ချို့ယွင်းချက်များရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူအများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ တခြားသူများသူတို့အပေါ်မြင်သည့်အမြင်ကိုဖြစ်စေ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်သည့်အမြင်ကိုဖြစ်စေတားဆီးထားပါတယ်။ သုတေသနအရ အမျိုးသားများဟာ အလုပ်ကြော်ငြာများတွင်ပါဝင်‌သောလိုအပ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိသော်လည်း ထိုအလုပ်ကိုလျှောက်ထားလေ့ရှိတတ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများကတော့ သူတို့နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်လုံးဝလျှောက်ထားခြင်းမရှိတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အား ဝေဖန်ခွင့်ပြုမည့်အစား သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကန့်အသတ်များကိုလက်ခံရပါမယ်။
[အားထုတ်မှု : တခြားသူတွေကသင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်အောင်ကူညီဖို့ကြိုးစားပါ]
အခြားသူများကသင်ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုမသိပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ သင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့နည်းလမ်းကိုမသိရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာသင်ရဲ့တန်ဖိုးကို အလေးထားခြင်းရှိမရှိသိအောင် သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုသူတို့နားလည်သ‌ဘောပေါက်အောင်လမ်းညွှန်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ သင်ဟာ Senior Staff တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် သင့်ရဲ့ရာထူးအတွက်သင့်မှာ ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ Junior Staff နဲ့ စကားပြောခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Attitude ကိုကြည့်ပြီးသူတို့က သင့်ကိုအထင်သေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စကားဟာ သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသူများသင့်အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားအမြင်ကိုပုံဖော်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(Amazon Link: https://www.amazon.com/gp/product/0525540814?tag=randohouseinc7986-20)
Hard Work Isn’t Enough: How to Find Your Edge – Harvard Business School Working Knowledge (hbs.edu)